Home Wararka Maleeshiyaad ku dagaalamay Galgaduud
Dagaal sababay sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa maanta waxaa ka dhacay deegaanka xeraale oo hoostaga Degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud.
Goobjoogayaal ayaa sheegaya in dagaalka uu dhexeeyay maleeshiyaad ka soo kala jeeda magaalooyinka Guriceel iyo Balanbale Ee Gobolka Galgaduud.
Inta la xaqiijiyay 2 qof ayaa ku geeriyootay dagaalka, halka 8 kalana ay ku dhaawacmeen, kuwaasi oo badan dhinacyadii dagaalamay.
Dadka ku dhaawacmay dagaalka ayaa la dhigay mid ka mid ah isbitaalada ku yaala degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud.
Guddoomiyaha degmada Balanbale Jaamac Xayle Maxamed ayaa sheegay in dagaalka uu salka ku hayo aanooyin qabiil oo maalmahan ka taagnaa deegaanka xeraale ee hoostaga degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud.
Xaalada deegaanka lagu dagaalamay ayaa haatan kacsan, waxaana la dareemay xiisad dagaal oo halkaasi ka taagan